Cajón de Sastre, धेरै, धेरै चाखलाग्दो उत्सुकताहरू - Ikkaro
अन्य जिज्ञासा र उपयोगिताहरू जुन म वर्गीकरण गर्ने बारे निश्चित छैन, कि त तिनीहरू विषयको बाहिर छन् वा किनभने मेरो आफ्नै सेक्सन सिर्जना गर्न पर्याप्त सामग्री छैन।
मिश्रित झोला जुन कुनै ब्लग प्रकोप होईन। धेरै अफ-शीर्षक शीर्षकहरू जुन मुख्य ब्लग कोटीहरूमा बाहिर पर्छन्। यहाँ हामी DIY, र आविष्कारहरु सम्बन्धित सबै चीज को एक धेरै पाउन सक्नुहुनेछ।
विज्ञान, समाचार, जिज्ञासा, असम्भव आविष्कारको समाचार। हामी बाइकहरू, पा and्ग्राहरू र गोल्डबर्ग मेशिनहरू, वृत्तचित्रहरू, सर्टहरू, नासा कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छौं जुन तपाईंलाई वास्तवमै मनपर्दछ।
विचार यो दराजलाई समयको साथ संगठित गर्नु र विषयवस्तुहरूमा समूहबद्ध गर्नु हो। तर तपाइँ पहिले नै थाहा छ ...
Novelas y ensayos de los que hablamos en el blog y están ambientados en los nativos de Norteamérica Comanche y पागल हार्स र क्लस्टर
मैले युट्यूब च्यानलमा "फेरि" पोस्ट गर्न सुरू गरें। यी बर्षहरूमा मैले विभिन्न चीजहरूको बारेमा १२ भिडियो छोडेको थिएँ, तर मैले निरन्तर प्रकाशित गर्न सुरू गरें।
मैले रेकर्ड गरेको अन्तिम तीन भिडियोहरू मैले ब्लगमा प्रकाशित गरेको पोष्टको अनुरूप हो, तर यो सधैं यस्तो हुँदैन। यूट्यूब च्यानल को विचार ब्लग मा जानकारी को पूरक हो र यदि म सफल भयो भने, यसको आफ्नै जीवन हुन सक्छ। म केहि चीजहरू प्रकाशित गर्न चाहन्छु जुन रोचक छ तर त्यो मेरो आफ्नै पोस्ट पाउन एकदम साधारण छ वा जसको लागि भिडियो ढाँचा लिखित भन्दा बढी उपयुक्त छ।
यदि तपाईं सदस्यता लिन चाहानुहुन्छ भने तपाई यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हामी करीव 300०० छौं :)
तपाइँ सदस्यता लिन मा रुचि राख्नु भयो भने तपाइँको लागि नयाँ भिडियोहरु:
अब हो। यो इकर्कोमा १२ बर्षमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो। र हेर, मैले वेबमा र वेबमा कार्यहरू गरें। धेरै विचार पछि, मैले Ikkaro लाई अधिक व्यक्तिगत वेबसाइटमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छु। अहिले सम्म मैले प्रकाशित गरेको सबैले फिल्टर पारित गरे। सबै कुरा राम्ररी सम्बन्धित थियो। अब केहि चीजहरू देखा पर्दैछन् जुन सामान्य मार्गबाट ​​विचलित हुन सक्छ। तर मलाई थाहा छ कि छनौट गरिएको विषय जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो दृष्टिकोण, यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका र बाँकी वेबसँगको स्थिरता।
म वेब अन्त्य नहुने तर एक साधनको रूपमा यसको प्रयोगको लागि चाहन्छु। म केवल सम्पन्न चीजहरू पोस्ट गर्न रोक्न चाहन्छु यसको प्रयोग गर्न सुरू गर्नका लागि चीजहरूको जानकारी एकत्र गर्न। विचारहरू जुन उत्पन्न हुन्छन्, परीक्षणहरूको असफल हुन्छन्।
किन म कुनै अनुभव वा कुरा बताउन जािरहेको छैन कि मैले कसैसँग गरेको कुराकानी छ यदि मैले चाखलाग्दो चीजहरू निकालेको छु? त्यस क्षणबाट जब म इक्कारोलाई मेरो मात्र व्यक्तिगत वेबसाइट बनाउँछु, सम्पूर्ण प्रस changes्ग परिवर्तन हुन्छ। म रमाइलो मा जीत हुनेछ।
अन्तमा हामी केहि गर्छौं हामी केहि गर्छौं, हामी मा केहि हुन्छ र हामिले चासो लिन्छ र यसलाई यहाँ वरिपरि प्रतिबिम्बित गर्नु राम्रो हुन्छ। मैले पहिले नै बिभिन्न वेबसाइटहरू र विषयवस्तुहरू एकीकृत गरिसकेका छन् जुन मैले तितरबितर गरिसकेका थिए र ती पहिले नै इक्कारोमा एकीकृत छन्।
राजाहरूबाट विशेष उपहार
म सामान्यतया ब्लगमा राजाहरूको उपहार साझा गर्दछु, यो लगभग परम्परा हो। भाग्यपूर्वक उनीहरूले मलाई मनपर्ने कुराहरु छोडिदिए, उनीहरूको लागि नसोधेर र त्यसले ब्लगमा कुराकानीलाई बढावा दिन्छ। अब दुई and र year बर्षे उमेरका केटीहरूसँग मेरो उपहारहरू बाहेक, उनी निकै चाखलाग्दो हुन थालेका छन्।
यस बर्ष मैले प्रविष्टि प्रकाशित नगर्ने निर्णय गरें, र त्यसपछि मेरो आश्चर्यको कारण मैले सोचे कि यो चाखलाग्दो छैन, धेरै व्यक्तिहरूले मलाई यसको बारेमा सोधे। र यो लेख तिनीहरूको बारेमा हो, यी व्यक्तिको बारेमा जसले मलाई उनीहरूको टिप्पणीहरू र ईमेलहरूको साथ प्रोत्साहित गर्छन्। म प्रकाशनमा ढिलाइ भएकोमा माफी चाहन्छु, तर बिभिन्न व्यक्तिगत मुद्दाहरूको कारणले यो पहिले त्यस्तो हुन सक्दैन।
सबैभन्दा चाखलाग्दोको एक गोलको साथ जाऊँ।
मेरो .85..8,5 ″ LCD लेख्ने ट्याब्लेट LZSXNUMX (बोगी बोर्ड)
यो कसरी कथा छ अन्जानमा मैले एलसीडी राइटि Tablet ट्याब्लेटको साथ समाप्त गरें। म ब्राउज गर्दै थिएँ, प्रत्येक दिन जस्तै र मैले गियरबेस्टमा एउटा प्रस्ताव देखें जुन मैले सोचे कि डिजिटल ग्राफिक्स ट्याब्लेट हो, हामी वाकमजस्तै छौं तर € at मा। आठ यूरो !!! यो जति खराब छ, यो worth चीजहरू गर्न लायकको थियो जुन म कहिलेकाँही दिमागमा हुन्छु। त्यसैले मैले यो किनें।
आश्चर्यजनक कुरा आउँछ जब मैले यसलाई प्राप्त गरेको छु र म यो देख्छु कि यो एकदम राम्रो छ र यसमा यसलाई कहिँ पनि जडान गर्न केहि पनि छैन, वा यसलाई केही पनि लोड गर्न। त्यसैले म फाइलमा फर्कें र हो ... मैले मेरो अधिकारमा एलसीडी राइटि Tablet ट्याब्लेट राखेको छु, जुन हडबडमा मलाई लाग्छ कि नामले मलाई बहकायो। केहीले यसलाई बोगी बोर्ड भन्छन्, यद्यपि यो एक ब्रान्ड हो जसले उत्पादनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
नोडलि forको लागि मेरो खोजी टड म्याक्लालन र उनको पुस्तकको छविहरूबाट मलाई थाहा छैन चीजहरू यसका साथै आउँछन्: आधुनिक लाइभको लागि एक टिअर्डउन म्यानुअल ती विस्फोटित छविहरूले मलाई प्रेममा डुबायो र लेखकको बारेमा बढि जानकारी खोज्दै मैले चिनेको छु संगठनको विधिको रूपमा नोलिंग, तर एक कला फारमको रूपमा, दैनिक वस्तुहरूबाट सुन्दरता सिर्जना गर्न।
बर्षे वस्तुहरु अलग गर्नु र सबै चीजको टुक्राहरूलाई स्वतन्त्र इच्छामा छोडे पछि, यसलाई छुट्ट्याउन को लागी एक धेरै रमाईलो र सुन्दर तरीका हुन सक्छ। यसले मलाई विश्वास दिलाएको छ।
केपल भनेको के हो?
तयारी गर्दै कालिडोसाइकलमा लेख म किप्पलको अवधारणामा आएको छु र म तपाईंसँग यसलाई बाँड्न सकेन किनकि यो प्रत्येक शब्दलाई चाहिने शब्द हो।
फिलिप के। डिकको उपन्यासमा किपेल देखा पर्छन् के Androids इलेक्ट्रिक भेडाको सपना छ? पक्कै राम्रो रूपमा परिचित ब्लेड धावकपौराणिक, विज्ञान कल्पना उपन्यास र चलचित्र मैले वर्षौं बर्ष पहिले पढेको थिएँ। ठिक छ, यहाँ किप्पलले परिभाषित गर्दछ:
बायो कोडर, DIY बायोको बारेमा पत्रिका
२०१ 2013 मा उनको जन्म भए पछि म उनलाई अनुसरण गर्दै छु यद्यपि अहिले मसँग धेरै संख्याहरू पढ्न बाँकी छ, तर मैले पहिले नै समात्न सुरु गरिसकेको छु ;-)
पत्रिका BioCoder, O'Really DIY बायो को समर्पित बाट एक नि: शुल्क पत्रिका हो। यो त्रैमासिक आधारमा DIYBio, DIY मा निबन्धको साथ प्रस्तुत छ तर जीवविज्ञान, सिंथेटिक जीवविज्ञान, आनुवंशिक ईन्जिनियरि,, आदिमा लागू हुन्छ।
म किन यो सिफारिश गर्दछु? किनभने एक उत्तम तरिका तपाईंलाई बायो DIY को दुनियामा परिचय गराउनको लागि, तर सबै भन्दा बढि किनभने हामीलाई नयाँ परियोजनाहरू र खुला हार्डवेयर उपकरणहरूको ठूलो संख्यामा परिचय गराउँछ त्यो हामीलाई DIY हासिल गर्दै छ कि आयाम र महत्त्व को महसुस गराउँदछ
यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ कि यो धेरै जटिल छ भने, शान्त हुनुहोस्। यो धेरै प्राविधिक छैन र सबै परीक्षणहरू अनुसरण गर्न सक्दछ यदि तपाईं यो संसारमा शुरू गर्नुभएको छैन, हो, यो अंग्रेजीमा छ।
PCL वा polycaprolactone
यदि तपाईं यो नाम सुन्न पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ किनकि आज तपाईं अचम्मित हुनुहुनेछ। पीसीएल एक थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक हो जुन हामी यसलाई गरम पार्ने बेलामा आफ्ना हातहरूसँग मोल्ड गर्न सक्छौं º०ºC वरिपरि र त्यो चिसोमा कठोर हुन्छ र हामी प्रक्रियालाई बारम्बार दोहोर्याउन सक्छौं सयौं पटक।
चिसो भएपछि, यो कठोर र कठोर भयो, बिजुली वा तातो संचालन गर्दैन, गैर विषैले र जैवविकास योग्य हो। यो हाम्रो आविष्कारका लागि उत्तम समाधान जस्तो देखिन्छ?
मेरो लागी मलाई सुग्रीको सम्झना दिलाउँछ, तर यसको पुन: प्रयोग गर्न सक्षम हुनु र यो अधिक मेहनत गर्न गाह्रो जस्तो देखिन्छ। जे होस् पक्कै पनि बारम्बार यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्षम हुनु एकदम महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो।
जादू कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् ...